San Htun's Diary: Do Less. Accomplish More.
အသက်ပဲ အသေခံမယ်... လုံးဝပြောဘူး....စိတ်ချ :P
အင်း တူတူပဲ ။ Do More. Accomplish Less ဖြစ်နေတယ်။ သူများတွေများ စာကျက်တာ ခဏလေးရယ်။ သီအိုရီဆိုလည်း တစ်ခါတည်း မှတ်မိတယ်။ ကိုယ်က အတန်းသားအချင်းချင်း မျက်နှာဖြဲပြီး တပည့်ပြန်လုပ် ၊ စာပြန်မေးနေရတယ်။ ကုသိုလ်ကံများမကောင်းချက်...ဟွန်း။